လမ်းပြကြယ်: အာဏာရှင်စနစ် ရဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာများ
အာဏာရှင်စနစ် ရဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာများ
လစဉ်ထုတ် အွန်လိုင်း ခေတ်မောင်းစာစောင်၊ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၄) မှ
အာဏာရှင် စနစ်ကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရင် အလွယ်ကူဆုံး အနေနဲ့ လူ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး တစ်ယောက် (သို့) အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု (သို့) အုပ်စု တစ်စု က ကိုယ်ကျိုးတစ်ခုတည်း အတွက် တိုင်းပြည်မှာ အဓမ္မ အုပ်ချုပ်ခြင်းလို့ ဖွင့်ဆိုနိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ် ဆိုတာ ကိုတော့ အာဏာရှင်စနစ် ရဲ့ ပြောင်းပြန်၊ တိုင်းပြည်က လူအားလုံး အကျိုးအတွက် တိုင်းပြည်ကို လူထု က တရားမျှတ၊ ဓမ္မ နည်းဖြင့် အုပ်ချုပ်ခြင်း လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဒီမိုကရေစီ နည်းနဲ့ တိုင်းပြည်မှာ လူထု က အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်မှာ လူထု အများစု ရဲ့ သဘောထား၊ အတွေးအခေါ်၊ အမျှော်အမြင် နဲ့ ပညာ အရည်အသွေး မြင့်မား၊ မှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။ အာဏာရှင်ခေတ်က ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ စနစ်ဆိုး၊ အကျင့်ဆိုးတွေရဲ့ စရိုက်ဆိုးတွေကို ဒီမိုကရေစီ ခေတ်လူထုက အခြေခံကျကျ နားလည် သဘောပေါက်ပြီး ရှောင်ကြဉ် နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကျော် စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဒဏ် ခံခဲ့ရကာ ခုအချိန်ထိလည်း စနစ်ဆိုး က အလုံးစုံ မပြောင်းလဲဘဲ၊ ပုံရိပ်သဏ္ဍာန် တင်သာမက အတွင်းသဘောအနေနဲ့ပါ ရှင်သန်နေဆဲ၊ အကျိုးဆက်တွေ ခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့ ဗမာပြည်က လူထု အတွက်တော့ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကို ဘဝ ပေး အသိ နဲ့ နာနာကြည်းကြည်း သိမြင် ခံစား နားလည်နေတဲ့အတွက် အနာဂတ် တိုင်းပြည်မှာလည်း အလားတူ မကြုံတွေ့၊ မခံစားစေဖို့ရာ စနစ်ဆိုးရဲ့ စရိုက်ဆိုးတွေကို မလွဲဧကံ ရှောင်ကြဉ်မှာပါပဲလို့ ယူဆစရာ ရှိပါတယ်။
မှန်ပါတယ်..။ နားလည်လွန်းလို့၊ နောင်အနာဂတ် တိုင်းပြည်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ မခံစားစေချင်လွန်းလို့ ကို ဒီစနစ်ဆိုး တိုင်းပြည်မှာ ပပျောက်စေဖို့အတွက် ခေတ်အဆက်ဆက် နှစ်ပေါင်းများစွာ လူ့အသက် နဲ့ ဘဝတွေကို စတေးပြီး တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို စနစ်ဆိုး ဒဏ် ကျောကော့အောင် ခံရင်း၊ ပြန်လည် တော်လှန်ရင်းနဲ့ပဲ စနစ်ဆိုးက အင်တိုက်အားတိုက် ဖော်ဆောင် ပေးခဲ့တဲ့ အယူအဆ၊ ဝါဒ၊ အတွေးအခေါ်၊ အပြုအမူ နဲ့ အလုပ်တွေဟာ လူထုကြားကို ထဲထဲဝင်ဝင် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့လေ့ရှိတာဟာလည်း ဖိနှိပ်မှု ပြန်းထန် တဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ သဘောဆိုတာကို သတိပြုရပါမယ်။
စိတ်ပညာရပ် မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရသူတွေဟာ သူတို့ကို ပြန်ပေးဆွဲသူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ခံစားချက် နဲ့ လုပ်ရပ် တွေကို နားယောင် လက်ခံလာပြီး ပြန်ပေးဆွဲသူတွေ အပေါ် ပြန်လည် ထောက်ခံ၊ ကာကွယ်မှု ပေးတတ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးကို စတော့ဟုမ်း ရောဂါလက္ခဏာ လို့အမည်ပေးပြီး စိတ်ရောဂါ အနေနဲ့ သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အမေရိကန် ဗဟို ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ကြီး (အက်ဖ်ဘီအိုင်) ရဲ့ လေ့လာချက် အရဆိုရင် ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေရဲ့ (၂၇) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရသူ သားကောင် တွေဟာ ဒီလို စတော့ဟုမ်း ရောဂါလက္ခဏာ စွဲကပ်နေလေ့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီသဘောဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိနှိပ် ချုပ်ခြယ်၊ ဝါဒမှိုင်းတိုက်မှု ဒဏ်တွေကို မျက်စိပိတ်၊ နားပိတ်၊ ပါးစပ်ပိတ်၊ တံခါးပိတ် နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံခဲ့ရတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်တွေက လူထုအများစု အတွက်လည်း အတူတူပါပဲ။ အာဏာရှင်တွေ အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် စရိုက် လက္ခဏာတွေ လူအများအကြားမှာ အနည်း၊ အများဆိုသလို ဝင်ရောက် ပူးကပ်နေလေ့ရှိတာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေ အာဏာ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်၊ အတွေးအခေါ် နဲ့ အပြုအမူ တွေဟာ မှန်တယ်၊ ဒါတွေကို ဆက်လက် ဖော်ဆောင် (သို့) ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတွေဟာ အာဏာရှင်တဖြစ်လဲ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အဖြစ်အပျက် နဲ့ သဘောတွေပါပဲ။
ဒီလို သဘောနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အယူအဆ နဲ့ အပြုအမူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ်လို့ အမည်တပ်ပြီး သွားနေတဲ့ လက်ရှိ ဗမာပြည်ရဲ့ နေရာ ကဏ္ဍတိုင်း လိုလိုမှာ ထင်ထင်ရှားရှားဆိုသလို မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဥပမာဆိုရရင် ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော် တိုင်းပြည်မှာ ဖော်ထုတ်၊ တင်ပြ၊ တောင်းဆို၊ ဆွေးနွေးခွင့်မရခဲ့တဲ့ လူအခွင့်အရေး နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ သဘော နဲ့ ခံယူချက်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့ လူမှန်သမျှ အယုတ်၊ အလတ်၊ အမြတ်၊ ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ အသားအရောင် မခွဲ တူညီတဲ့ အခွင့်အရေး၊ ရပိုင်ခွင့် နဲ့ တန်ဖိုးထားမှု သဘော ကို အပြည့်အဝ နားလည်မှု မရှိတာ၊ လက်ခံ နားလည်ဖို့ ကြိုးစားချင်စိတ် မရှိတာ မျိုးတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါမယ်။
ဒီလို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ် တစ်ခုကို ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားနေစဉ်မှာ စိမ့်ဝင်၊ စွဲထင် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အာဏာရှင်စနစ် အကျင့် စရိုက် နဲ့ အတွေးအခေါ် တွေ လူထူ အများကြား လုံးဝ ဆိတ်သုဉ်း ပပျောက်စေဖို့ရာက နိုင်ငံရေး နဲ့ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက လူထုပညာရေး လုပ်ငန်းတွေ အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်ပြီး တိုင်းပြည် အနာဂတ် အတွက် အကျိုးကျေးဇူးခံစားရမယ့် ကောင်းမွန်ပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီ သဘော ရဲ့ တကယ့် အနှစ်သာရ နဲ့ သူရဲ့ ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ အကျိုးရလဒ် တွေကို လူထုကြား ဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလို ဒီမိုကရေစီ အတွေးအခေါ်တွေ လူထုကြား ရှင်သန်ဖို့ ပညာပေးတာဟာ အာဏာရှင် တဖြစ်လဲတိုင်းပြည်မှာ လူထုပညာပေးရေး လုပ်ငန်း အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ ဖော်ဆောင်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေရဲ့ ဒုတိယ အဆင့်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပထမ နဲ့ အဓိက အရေးကြီးဆုံး အလုပ်ကတော့ လူထုအများစု ရဲ့ မသိစိတ် အတွင်း အဇ္ဈတ္တသန္တာန် မှာ စွဲကပ်နေပြီး ဖြစ်တဲ့ အာဏာရှင် စရိုက် လက္ခဏာ တွေကို သိမြင်၊ သုံးသပ်၊ အကျိုးသင့်၊ အကြောင်းသင့် နားလည်၊ လက်ခံလာပြီး ဒီမိုကရေစီ နဲ့ မလျော်ညီတဲ့ အကျင့်ဆိုး၊ အကျင့်ဟောင်းတွေ စွန့်လွှတ်နိုင်စေဖို့ရာ အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အပြုအမူ နဲ့ လုပ်နည်း၊ လုပ်ဟန် နဲ့ သဘော တွေကို လူအမျာစု သိမြင်လာအောင် ပညာပေးခြင်း အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဓမ္မ နဲ့ အဓမ္မ၊ တရားမျှတမှု နဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှု၊ အခွင့်အရေး တန်းတူ ညီမျှမှု နဲ့ မညီမျှမှု၊ လူပီသိမှု နဲ့ မပီသမှု၊ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ အာဏာရှင် စနစ် တို့ရဲ့ ပြဒါး တစ်လမ်း၊ သံ တစ်လမ်း ဆန့်ကျင်ဘက် ဝိရောဓိ သဘောကို လူအများ အခြေခံကျကျ နားလည် လက်ခံလာပြီး စနစ်ဆိုးဒဏ်ကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ မသိစိတ်မှာ တွဲကပ်နေတဲ့ အကျင့်ဆိုး နဲ့ အတွေးအခေါ် အဟောင်း၊ အဆွေးအမြေ့ တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း သဘောပေါက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းလမ်း တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ စိတ်ဓာတ်၊ အတွေးအခေါ် နဲ့ အကျင့် မျိုးစေ့တွေ အမြစ်တွယ် ရှင်သန် ကြီးထွား ဖွံဖြိုး စည်ပင်လာစေနိုင်ပြီး အာဏာရှင် စနစ်ဆိုး အပြီးသတ် ဖုတ်ကြည်းသင်္ဂြိုဟ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာများကို လူအများစု နားလည် သဘောပေါက်ထားမှသာ အနာသိရင် ဆေးရှိတဲ့သဘောအနေနဲ့ အာဏာရှင် ရောဂါဆိုးကို အမြစ်ပြတ်အောင် ကုသနိုင်ပြီး တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရှင်သန်ဝပြောစေတဲ့၊ နိုင်ငံ နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် သုခ ချမ်းသာ စွမ်းဆောင်ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ နိုင်ငံ့ စနစ် ကျန်းမာရေး လာဘ်ကြီးတပါး ရရှိခံစား လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ကိုယ်တိုင် ရောဂါဆိုးကို နှစ်ရှည်လများ စွဲကပ် ခံစားနေရနေပေမယ့် ရုပ်ရှင် ပိတ်ကား ကို အနီးဆုံး ရှေ့တန်းက ကြည့်ရှုရရင် အမြင်အာရုံ ဝေဝါးစေကာ သိမြင်နားလည်မှု နည်းစေတဲ့ သဘောအတိုင်း ရောဂါရဲ့ သွင်ပြင် လက္ခဏာတွေကို အသိအမှတ် ပြုမှုနည်းပါကာ ယုံကြည်အမှတ်မှားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ် စေတဲ့အတွက် ဒီ အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးရဲ့ သဘော သဘာဝ၊ အတွေးအခေါ် နဲ့ အပြုအမူ တွေကို အထူးပြု သေချာ လေ့လာကာ လူထုအကြား အမှန်တကယ် သိနားလည်လာစေမှု အင်မတန် အရေးကြီး လိုအပ်လှ ပါတယ်။ ဒါမှသာ လူထုက အုပ်ချုပ်တဲ့၊ လူထုသဘောက အရေးပါ အရာရောက်တဲ့ ဒီမိုကရေးစီ တိုင်းပြည်သစ်ရဲ့ ရှေ့အနာဂတ် ခရီးလမ်းဟာ ဖြောင့်ဖြူးသာယာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးတယောက်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု (သို့) လူတစ်စုက တိုင်းပြည်ရဲ့ ကဏ္ဍအသီးသီးကို အလုံးစုံချုပ်ကိုင် အုပ်ချုပ်တဲ့ အာဏာရှင် စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ တိုင်းပြည်တွေကို လေ့လာရင် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပြီး ယေဘုယျ သဘောဆောင်တဲ့ ဘုံတူညီနေတဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာတွေ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ဆက်လက် ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာကို ရှုပါ။
လမ်းစဉ် တစ်သွယ်၊ ပါတီ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု၊ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်
အာဏာရှင် စနစ်တွေမှာ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး၊ သူ့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါတီ တစ်ခု နဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးတည်း သဘောဆန္ဒ နဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ဖော်ဆောင်တဲ့ လမ်းစဉ် တစ်မျိုးတည်းသာ တစိုက် မတ်မတ် ကြီးစိုးလေ့ရှိပါတယ်။ တချို့ အာဏာရှင် တိုင်းပြည်တွေမှာ ပါတီ တချို့ကို ဟန်ပြ တည်ထောင်ခွင့် ပေးထားလေ့ရှိပေမယ့် မရှင်သန် မကြီးထွားစေဖို့အတွက်တော့ အဘက်ဘက်ကနေ အလုံးစုံ နှိပ်ကွပ် ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးတည်း နဲ့ သူ့ပါတီ သာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ ပြယုဂ်၊ တစ်နိုင်လုံးရဲ့ စုစည်း ညီညွှတ်ရာ၊ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြစ်ချက်၊ ဝါဒ၊ အတွေးအခေါ် နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေသာ နိုင်ငံမှာ တစ်ခုတည်းသော ရှင်သန် ကြီးထားရာ၊ သူ (သို့) သူ့ပါတီ (သို့) သူ့လမ်းစဉ် သာ နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံတဲ့ အုတ်မြစ် နဲ့ အနာဂတ်လမ်း ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သဘောနဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီ ဂျာမဏီ မှာ သြဇာ အာဏာ အထွပ်အထိတ် ရောက်ခဲ့ပြီး ဂျာမန် ပြည်လူထု ကို အဝီစိချောက်ထဲအထိ ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တဲ့ ဟစ်တလာကတော့ “စကြာတံဆိပ် ကို ရွေးမလား၊ ကြိုးစင်ကို ရွေးမလား” ဆိုပြီး လူထုကို ခြိမ်းခြောက် ဆိုလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ စကြာ ကို ရွေးခဲ့တဲ့ ဂျာမန် လူထု နဲ့ ဂျာမဏီပြည်ဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ရှက်ဖွယ်လိလိ ဆိုတဲ့ ရာဇဝတ်မူ အကြီးကြီးတွေကို ကျူးလွန်ပြီး အလုံးစုံ ကျရှုံး နိုင်ငံအဖြစ် သမိုင်းဇာတ်သိမ်း မလှ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ လွတ်လတ်မှု ပျောက်ကွယ် ဆိတ်သုဉ်းခြင်း
အာဏာရှင် စနစ်မှာ လူတစ်ဦးချင်း ရဲ့ သဘောဆန္ဒ၊ လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ အခွင့်အရေး ဟာ လုံးဝ မရှိ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အာဏာရှင် စိတ်တိုင်းကျ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ မတရားတဲ့ တရားဥပဒေ ဆိုတာရဲ့ အချုပ်အနှောင်ကို အလုံးစုံ ခံရလေ့ရှိပါတယ်။ ပညာရေး စနစ်၊ လူထုဆက်သွယ်ရေး နဲ့ ပညာပေးရေး ကြားခံတွေဖြစ်တဲ့ သတင်းစာ၊ စာပေ၊ ရုပ်ရှင် တွေဟာ အာဏာရှင်က စိတ်တိုင်းကျ ချုပ်ကိုင် ထားနိုင်မှုနဲ့အတူ အာဏာရှင် သွတ်သွင်းလိုတဲ့ သဘော၊ ဆန္ဒ၊ အယူဝါဒ တွေသာ ဝါဒဖြန့်ချီဖို့သက်သက် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီသဘောမှာ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့်၊ အစည်းအရုံး ထူထောင် ဖွဲ့စည်းခွင့် နဲ့ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်တွေဟာ လုံးဝ ဆိတ်သုဉ်း ပျောက်ကွယ် သွားပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မတိုင်ခင်က အီတလီ နိုင်ငံမှာ ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်ကြီး မူဆိုလီနီ ကတော့ “လူထုဟာ လွတ်လပ်ခွင့် ကို မလိုဘူး။ အမိန့်၊ ဥပဒေ နဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပဲ တသွေမတိမ်း လိုက်နာဖို့ပဲ လိုတယ်” လို့ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အာဏာရှင် စနစ်မှာ ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားတွေဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်ခြင်း၊ တန်းတူညီမျှခြင်း၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေဟာ အမိန့်နာခံခြင်း၊ စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်း နဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်း ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေအောက်မှာ နစ်မွန်းခဲ့ရပြီး လူတစ်ဦးချင်း ရဲ့ လူပီသအောင် လူလိုနေထိုင်ခွင့်ရမှု မဲ့ကာ လူအခွင့်အရေးဟာ အလုံးစုံ ကွယ်ပျောက်လေ့ ရှိပါတယ်။
ပြည်သူလူထု ဘဝ လုံခြုံမှု မဲ့ခြင်း
အာဏာရှင်စနစ်မှာ အာဏာပိုင် နဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်ပါးစေ တွေဟာ အာဏာကို အတိုင်းအဆမရှိ ကျင့်သုံးခွင့်ရရှိစေပါတယ်။ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး စနစ် နဲ့ တရားဥပဒေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဟာလည်း အာဏာရှင် ရဲ့ လက်အောက်၊ အာဏာရှင် စိတ်ကြိုက်သာ ရပ်တည် ရတဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုမှာ အားကိုးစရာ မရှိ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိခြင်းနဲ့အတူ လူထုဟာ ဥပဒေ နဲ့ တရားစီရင်ရေး ဘောင် ပြင်ပ ရှာဖွေခံရခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ အပြစ်ပေး ထောင်ချခံရခြင်းတွေကို ထမင်းစားရေသောက် သဘောလို နေ့စဉ်ကြုံတွေ ခံစားနေရလေ့ရှိပါတယ်။
စစ်တပ် နဲ့ စစ်ပွဲတွေရဲ့ အခဏ်းကဏ္ဍ ကို မြှင့်တင်ခြင်း
အာဏာရှင်စနစ်မှာ စစ်တပ်ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင် အဖြစ် အစဉ်တစိုက် ရပ်တည်လေ့ရှိပြီး အခွင့်ထူးခံ အမြဲဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ စစ်ပွဲဖော်ဆောင်ခြင်းဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှု နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို အစဉ်အမြဲ ဦးထိပ်ထား ကျင့်ကြံ လုပ်ဆောင် လေ့ရှိပါတယ်။ စစ်အင်အား ကြီးမားအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာ နိုင်ငံကို ခိုင်မာတောင့်တင်း အင်အားရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ “တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် အင်အားရှိမည်” ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ။ အာဏာရှင် ဟစ်တလာ အလိုအရတော့ “အဆုံးစွန်သော စစ်ပွဲတွေကို ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုးဟာ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်စေတယ်..၊ အလုံးစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး နည်းလမ်းဟာ တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုးကို ပျက်စီးစေတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ် ဂျာမဏီ တိုင်းပြည် နဲ့ ဂျာမန် လူမျိုးကို အလုံးစုံ ပျက်စီးသွားစေခဲ့တာ ဘယ်အရာဆိုတာကတော့ သမိုင်းက သက်သေပြုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူလူထု (သို့) နိုင်ငံ ရဲ့ ဘုံရန်သူ အဖြစ် အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို မွေးမြူဖန်တီးခြင်း
အာဏာရှင်စနစ်မှာ လူမျိုးစုကွဲ၊ ဘာသာခြား၊ လူနည်းစု အုပ်စု တစ်ခုခုကို နိုင်ငံရဲ့ ရန်သူအဖြစ် ဗဟိုပြု ရန်ပြု တိုက်ခိုက် ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ် ခြင်း (သို့) နိုင်ငံရေး အယူအဆ၊ ဝါဒ၊ လမ်းစဉ် မတူတဲ့ လစ်ဘရယ်၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ ကွန်မြူနစ် စတဲ့ အုပ်စု တစ်ခုခုကို တိုင်းပြည်ရဲ့ အန္တရာယ် အဖြစ် လူထုအများစု အကြား ထင်မှတ်မှားအောင် ဝါဒဖြန့် မှိုင်းတိုက်ကာ တိုင်းပြည်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘုံရန်သူ အဖြစ် သတ်မှတ် မွေးမြူ ဖိနှိပ် ချေမှုန်းလေ့ရှိပါတယ်။ နာဇီ ဂျာမဏီခေတ်မှာ ဂျူးတွေနဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေကို နိုင်ငံ အန္တရာယ် အဖြစ် အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းခဲ့တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဗမာပြည်မှာ စစ်အာဏာရှင် ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံရေးနဲ့ ဖြေရှင်းရင် အလွယ်ကလေးနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ရနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ နဲ့ အယူဝါဒရေးရာ အုပ်စုတွေရဲ့ ပြဿနာကို မဖြေရှင်းဘဲ စစ်ရေးနည်းဖြင့် မြွေမသေ တုတ်မကျိုး ထားကာ ရန်သူမွေးထားခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းစစ်မီး တငွေ့ငွေ့ ဆက်စေခဲ့တဲ့ သဘောနဲ့လည်း အတူတူပါပဲ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ တကယ် မရှိတဲ့၊ တနည်းအားဖြင့် တကယ် အန္တရာယ် မပြုနိုင်တဲ့ ရန်သူကို ဖန်တီး မွေးမြူပြီး နှိမ်နင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့လည်း အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ဒေါက်တိုင် စစ်တပ်အင်အားကို အဆက်မပြတ် တိုးချဲ့နိုင်ခြင်းဖြင့် အာဏာရှည်စနစ် သက်ဆိုးရှည်အောင် ကြံဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။
အမျိုးသား လုံခြုံရေး အခဏ်းကဏ္ဍ ကို အလွန်အကျွံ မြှင့်တင်ခြင်း
“ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး အဆိုးမြင် ဝါဒီ များအား ဆန့်ကျင်ကြ”၊ “ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖျက်သမားများအား ဘုံရန်သူ အဖြစ် သတ်မှတ် ချေမှုန်းကြ”၊ “ကိုလိုနီလက်သစ် နယ်ချဲ့ဝါဒီ များအား ဆန့်ကျင်ကြ” “တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာ မဖောက်” စတဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေကို ရှေ့တန်းတင် ကြွေးကြော်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်၊ အခြာ၊ အာဏာ ကို ပြည်ပမှ ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ သဘောတွေ ရှိနေကြောင်း၊ စစ်တပ်ကို ဗဟိုပြုတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကသာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်ပ ရန်တွေကို တွန်းလှန် ဖယ်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ပြည်သူလူထု ကို ဝါဒဖြန့် ယုံမှတ်မှားစေခြင်းဖြင့် အမျိုးသား လုံခြုံရေး ပြဿနာ ကို လွန်လွန်ကျူးကျူး ပုံဖော်ကာ အာဏာသက်တမ်းကို ရှည်စေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ဖန်တီး မွေးမြူထားတဲ့ ဘုံရန်သူတွေ နဲ့ ဝါဒဖြန့်၊ အာဏာသက်ရှည်အောင် ကြံဆောင်ရတာ မလုံလောက်တဲ့ အတွက် ပြည်ပ ရန်သူကို ထပ်မံ မွေးမြူခြင်း သဘောလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အာဏာရှင် တိုင်းပြည်တွေဟာ နိုင်ငံခြားအမုန်းရောဂါ စွဲကပ်ကာ နိုင်ငံတကာနဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်၊ တံခါးပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ရင်ဘောင်တန်း လူတန်းစေ့၊ လူဝင်ဆန့် နိုင်မှု နည်းပါးကား ကျန်းမာ၊ ပညာ၊ လူမှု၊ စီးပွား အလုံးစုံ ချွတ်ခြုံကျ ပျက်ဆီး ရလေ့ရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဥပမာ ကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးစ အာရှတိုက်ရဲ့ အလားအလာ အကောင်းဆုံး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်မှု အရှိဆုံး တိုင်းပြည် ကနေ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး ကြောင့် ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် ထိုးဆင်း သွားခဲ့ရတဲ့ ဗမာပြည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မဟာ ဖို ဝါဒ ကျင့်သုံးခြင်း
အာဏာရှင် စနစ် တိုင်းပြည်တွေရဲ့ အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေး နဲ့ လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အမျိုးသမီး တွေရဲ့ အခဏ်းကဏ္ဍ ကို အရေးမပေးခြင်း၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံ နှိမ်ချခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီသဘောကို ဘာသာ နဲ့ လူမှု ထုံးတမ်း အရ အခြားသော အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်များထက် အစစအရာရာသာလွန်တဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး အစဉ်အဆက် ရှိခဲ့တဲ့ ဗမာပြည် မှာ လက်ရှိ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးဒဏ်ကြောင့် လူမှု၊ စီးပွား နဲ့ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေး ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေ ခွဲခြား ဖိနှိပ်၊ နေရာမရဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေက ကောင်းကောင်း သက်သေပြုနေပါတယ်။
လူမျိုးကြီး ဝါဒ ကျင့်ကြံ အားထုတ် ဖော်ဆောင်ခြင်း
အာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးတဲံ တိုင်းပြည်တွေမှာ လူအများစု လူထု ထောက်ခံမှု အစဉ်တစိုက် ရရှိစေဖို့အတွက် “ငါ့ဒို့သာ မြင့်မြတ်တဲ့ လူမျိုးကြီးတွေ” ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောကို အင်တိုက်အားတိုက် ဝါဒဖြန့် မြှင့်တင် ပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ ဟစ်တလာ ဟာ မြင့်မြတ်တဲ့ အာရီယန် မျိုးနွယ် ဂျာမန်တွေကသာ ကမ္ဘာ့လူသားမျိုးနွယ်တွေထဲမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံး၊ အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပြီးတော့ ဝါဒဖြန့်ရင်းနဲ့ ဂျာမန်လူထု ရဲ့ အသည်းနှလုံးတွေကို သိမ်းပိုက် ဖမ်းစား နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပဲ မူဆိုလီနီ ကလည်း ရှေးခေတ် ရိုမန် သူရဲကောင်း မျိုးနွယ်က ဆင်းသက် ပေါက်ဖွားတဲ့ အီတာလျံ လူမျိုးတွေကသာ ကမ္ဘာ့မှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လူထုကြား သွတ်သွင်းကာ လူထုကို သူ့နောက်လိုက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နေနတ်ဘုရားက ဆင်းသက်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ နေမျိုးနွယ် နိပွန် ဂျပန်တွေကသာ အာရှတိုက်ကြီးမှာ ကြီးစိုးရမယ် ဆိုတဲ့ ဝါဒမှိုင်းတိုက်မှုနဲ့ ဂျပန်ပြည်သူတွေကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အဆိုးထဲ ဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ ဖက်ဆစ်ခေတ် စစ်ဝါဒီ အာဏာရှင် စနစ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီက ဂျပန်နိုင်ငံ မှာလည်း ဒီသဘောအတိုင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ အမျိုးသားရေး ဝါဒ၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်များ တိုးပွားအောင် ဖော်ဆောင်ခြင်း
အာဏာရှင် စနစ်မှာ အာဏာရှင်တွေ နဲ့ အာဏာရှင် အတွေးအခေါ် ရှိသူတွေဟာ နိုင်ငံဂုဏ်၊ အမျိုးဂုဏ်၊ ဘာသာ သာသနာ ဂုဏ်ကို အကျိုးအကြောင်း မညီညွတ် မမျှမတ၊ အလွန်အကျွံ ချီးမြောက် ဂုဏ်ဖော် မြှင့်တင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဆုံးစွန်သော ရူးသွတ်မှု သဘောဆောင်တဲ့ အစွန်းရောက် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ကို လူထုရဲ့ အတွင်း စိတ်သဏ္ဍာန် မှာ ခိုင်မာ စွဲထင်၊ တိုးပွားအောင် လှုံ့ဆော်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ လူမျိုး/နိုင်ငံ/ဘာသာ/သာသနာ အတွက် လူထု က အစွန်းဆုံသော စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှု နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်မှု လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ လူအများကြား တဘက်စွန်းရောက် ရှင်သန်လာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျာမန်၊ ဂျပန် နဲ့ အီတလီ တို့ဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ လူမဆန်ဆုံးသော ရာဇဝတ်မှု အကြီးကြီးတွေကို လူမျိုး/သာသာ မတူသူတွေ အပေါ် လက်ရဲ၊ ဇက်ရဲ အဖတိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဆိုပြီး ကျူးလွန်ဖြစ်ခဲ့ ကြပါတယ်။
ဘာသာရေး နဲ့ နိုင်ငံတော် ရောထွေး ပေါင်းစပ် ယှက်နွယ် နေခြင်း
အာဏာရှင်စနစ် ရဲ့ အာဏာရှင်တွေ နဲ့ အစိုးရတွေဟာ တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ လူအများစု ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့ ဘာသာအယူဝါဒ တစ်ခုခုကို အလွန်အကျွံ ချီးမြှင့်မြှောက်စား အားပေးခြင်းဖြင့် လူထု ထောက်ခံမှု ရရှိအောင်လည်း ကြံဆောင် လေ့ရှိပါတယ်။ ဘာသာ၊ သာသနာ အဓွန့်ရှည် ရှင်သန်ကြီးထွား တည်တံ့ ခိုင်မြဲ စေဖို့အတွက် ဒီလို မင်းအစိုးရ နဲ့ စနစ် ရှိမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဖန်တီး တာဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေ၊ အစိုးရ ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ ပါးစပ်က သူတို့ တကယ် လက်တွေ့ ကျင့်ကြံ အားမထုတ်တဲ့ ဘုရား စကား၊ တရားစကား တွေ အတွင်တွင် ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ လူထုကို သူတို့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဝါဒမှိုင်းဆိုးတွေ နဲ့ ချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ မလုံလောက်တဲ့အတွက် ဘာသာတရား ကို အသုံးချ ခုတုံးလုပ် မှိုင်းတိုက် ဝါဒဖြန့်ခြင်းဖြင့် အာဏာသက်ဆိုးရှည်စေဖို့ ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောကိုတော့ ပါဋ္ဌိ လိုတွေ ရွက်ရွက် ပြပြီး ဘုန်းကြီး ပြန်စာချ လေ့ရှိတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ တွေ့ကြုံရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ ဗမာလူထု ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျင့်ပျက် ခြစား မှု နဲ့ ခရိုနီ စီးပွားရေး စနစ် အမြစ်တွယ်ခြင်း
အာဏာရှင် စနစ်တွေမှာ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှု၊ အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ အကျင့်ပျက် မှုတွေ ဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ ဖောက်ပြန်မှု သဘော မဟုတ်တော့ဘဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လူအများစု အကြား ရှင်သန် နေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ် အနေနဲ့ တည်ရှိလေ့ရှိပါတယ်။ တဆက်တည်း အာဏာရှိသူ က လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ်၊ ကျွမ်းဝင်ရာ မျက်နှာသာပေး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ချပေးတဲ့ ခရိုနီ စီးပွားရေးစနစ်ဟာ တိုင်းပြည်မှာ တစ်ခုတည်းသော ရှင်သန်ကြီးထွားနေတဲ့ စီးပွားရေးစနစ် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အစိုးရ အာဏာပိုင် နဲ့ သူတို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ လူတစ်စုသာ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး အပါအဝင် အခြား အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍ တိုင်းမှာ စိတ်တိုင်းကျ ထိန်းချုပ် ခွစီး သွေးစုပ် အမြတ်ထုတ်နိုင်ပြီး အခြား လူတန်းစားအားလုံးဟာ အရိုးအရင်း လောက်နဲ့ မသေရုံစား အရှက်လုံရုံ ဝတ်ပြီး ဘဝတွေကို ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို ချမ်းသာတဲ့သူ က ထားစရာ နေရာမရှိအောင် ချမ်းသာပြီး ဆင်းရဲတဲ့သူက ကုန်းကောက်စရာ မရှိတဲ့ ဆင်းရဲ၊ချမ်သာ ကွာဟ ကြီးမားခြင်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ မဏ္ဍိုင် ကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေပြီး အကျင့်ပျက် ခြစားမှု နဲ့ အာဏာပိုင်နဲ့ ပေါင်းလုပ်စားခြင်း ဓလေ့ဟာ အမြစ်တွယ် သထက် တွယ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ နိစ္စဓူဝ အသက်ရှင် ရပ်တည်၊ ဝမ်းရေးအတွက် ရုန်းကန် လူပ်ရှားနေရတဲ့ ဗမာ လူထု အတွက် ဒီသဘောဟာ တိုင်းပြည်မှာ ဒေါ်လာ တစ်သောင်းတန် ဝိုင် နဲ့ ဧည့်သည်ကို ဧည့်ခံနိုင်တဲ့ လူချမ်းသာ လက်တဆုပ်စာ လူတန်းစား၊ “လာဘ်ပေး ရန်မလို” လူထုဟာသ နဲ့ “အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မည်” ဆိုတဲ့ ခံယူချက် သဘောလိုကို ဖြစ်နေတဲ့ ဆောင်ပုဒ် စတာတွေကို သိမြင်ခံစားပြီး နားလည် သဘောပေါက်စေနိုင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ အတု တွေ၊ ထောင်ခံပွဲ အတုတွေနဲ့ လူထု ထောက်ခံမှု အတုတွေကို ပြသခြင်း
အာဏာရှင် စနစ်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ ကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်တဲ့ သဘော အပေါ်ယံ ဟန်ပြ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲ တိုင်း လိုလိုဟာ ရှက်ဖွယ်လိလိ မဲမသမာမှုတွေ၊ တရားမမျှတမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းများနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရတိုင်း၊ နိုင်ငံတကာ က ဖိအားတွေ ကြုံလာတိုင်း လူထု ထောက်ခံပွဲတွေ အတင်း အဓမ္မ ကျင်းပလေ့ရှိပြီး လူထုထောက်ခံမှု ရှိနေမြဲ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြသတတ်ပါတယ်။ ဒီသဘောကိုလည်း တမလွန်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မဲပေးခွင့်ရခဲ့တဲ့ ထူးခြားလှတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ဖြတ်သန်းဖူးတဲ့၊ “ထောက်ခံချင်လွန်းလို့ မနက် လေးနာရီ ကတည်းက ကိုယ့်ထမင်းထုပ် ကိုယ်ထုပ်ပြီး လာစောင့်နေပါတယ်” ဆိုတဲ့ ဟာသ ကို နာနာကြဉ်းကြဉ်း ရယ်မော ခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဗမာလူထု အလွယ်တကူပဲ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေကတော့ အီတလီ ဖက်ဆစ်၊ ဂျာမန် နာဇီ အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်၊ ဖရန်ကို ရဲ့ စပိန် ကစလို့ အခြား နောက်ပိုင်း မူဂါဗီ ရဲ့ ဇမ်ဘာဘွေ၊ ပီနိုချေး ရဲ့ ချီလီ၊ ဆူဟာတို ရဲ့ အင်ဒိုနီရှား၊ ကင်အီဆွန်း၊ ကင်ဂျုံအီတို့ရဲ့ မြောက်ကိုရီးယား၊ ကဒါဖီး ရဲ့ လစ်ဗျား၊ ဆဒမ်ဟူစိန် ရဲ့ အီရတ်၊ ရှေးရိုးစွဲ တွေရဲ့ အီရန်၊ ဗိုလ်နေဝင်း နဲ့ နောက်ပိုင်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဗမာပြည် စတဲ့ အာဏာရှင်စနစ် မျိုးစုံ ရှင်သန် ခဲ့၊ ရှင်သန်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ တူညီတဲ့ သွင်ပြင် လက္ခဏာ တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စနစ်ဆိုးရဲ့ အကျင့်ဆိုး၊ စရိုက်ဆိုး၊ အလုပ်ဆိုး၊ ခံယူချက်ဆိုး၊ အပြုအမူဆိုး တွေကို မျက်မှောက် ခေတ် ဗမာ လူထု နဲ့ အစိုးရ သိနားလည်သဘောပေါက် စွန့်လွှတ် ရှောင်ကြဉ် နိုင်ခြင်းဖြင့် အနာဂတ် ဗမာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခရီးလမ်း သာယာဖြောင့်ဖြူးလာကာ တိုင်းသစ်၊ ပြည်သစ် မှာ လွတ်လပ်မျှတ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အသစ်တွေ တည်ဆောက် နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
၂၇ ၊ သြဂုတ် ၊ ၂၀၁၂
လစဉ်ထုတ် အွန်လိုင်း ခေတ်မောင်းစာစောင်၊ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၄) မှခေတ်မောင်း အင်တာနက် စာမျက်နှာ : http://www.khitmaung.com/
(“ခေတ်မောင်း” ကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရှိ လူငယ်များ ပူးပေါင်း ရေးသား၊ ထုတ်ဝေ၊ အွန်လိုင်း ဖြန့်ချီသည်။)
G. Dwayne Fuselier, “Placing the Stockholm Syndrome in Perspective,” FBI Law Enforcement Bulletin, July 1999, 22-25.
Kevin Passmore, "Fascism: A Very Short Introduction", Oxford University Press, 2002.
Barry Rubin, “Modern Dictators: Third World coup makers, strongmen, and populist tyrants”, McGraw-Hill, 1987, ISBN 978-0-07-054161-0.
Dr. Laurence W. Britt, "Fascism Anyone?", Free Inquiry Magazine, Spring 2003, p-20.